အလင်းအလျင် - ဝီကီပီးဒီးယား
၁၉:၀၁၊ ၁၉ ဇူလိုင် ၂၀၂၀ နေ့က Aungookingofcelestials (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) (deleted numbers & point /point, comma within numbers would strain the eyes. (General figures r enough 'cuz mediums the light passes through speaks sth)) တည်းဖြတ်သည့်မူ
နေရောင်ခြည်သည် နေမှ ကမ္ဘာသို့ ၈ မိနစ် ၁၇ စက္ကန့်ခန့် ခရီးသွားရသည်
အနီးဆုံး တန်ဖိုး (ဒသမတန်ဖိုး ၃ နေရာထိ)
7003108000000000000♠1080 မီလီယံ (၁.၀၈×၁၀၉)
၆၇၁ မီလီယံ (၆.၇၁×၁၀၈)
တစ်ရက်လျင် AU နှုန်း
လကမ္ဘာ မှ ကမ္ဘာမြေသို့
နေ မှ ကမ္ဘာသို့ (၁ AU)
အနီးဆုံးကြယ်မှ နေသို့ (၁.၃ pc)
ကမ္ဘာမှ လေ့လာနိုင်သော စကြာဝဠာအနားစွန်းသို့
အလင်း၏အမြန်နှုန်း ဆိုသည်မှာ ရူပဗေဒတွင် စကြာဝဠာလုံးဆိုင်ရာ ပုံသေကိန်းဖြစ်သည်။ ယင်း၏ တန်ဖိုးအတိအကျမှာ တစ်စက္ကန့်လျင် ၂၉၉, ၇၉၂, ၄၅၈ မီတာနှုန်းဖြစ်သည်။ မိုင်အားဖြင့်ဆိုသော် ၁၈၆, ၂၈၂ မိုင်ခန့်ရှိသည်။ သင်္ကေတ c ဖြင့် ဖော်ပြသည်။ အထူးနှိုင်းရသီအိုရီအရ c သည် စကြာဝဠာထဲမှ အရာခပ်သိမ်း သတင်းအချက်အလက်မှန်သမျှ အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်းဖြင့် ခရီးသွားနိုင်သော အမြန်နှုန်းဖြစ်သည်။ c သည် ရင်းမြစ်၏ရွေ့လျားမှုအား မူတည်ခြင်းမရှိဘဲ ပကတိကိန်းသေနှုန်းဖြင့်သာ ရွေ့လျားသည်။ ဥပမာဆိုရသော် နေမှ ကမ္ဘာမြေသို့ ခရီးသွားနေသည့် အလင်းတစ်ခုသည် c တန်ဖိုးဖြင့် (တစ်စက္ကန့်လျင် မိုင်ပေါင်း ၁၈၆ဝဝဝ) ခရီးသွားသည်ဟုဆိုပါစို့။ ကမ္ဘာနှင့်နေကြားမှ အာကာသယာဉ်တစ်စင်းသည် နေဆီသို့ အင်မတန်မြန်သော အမြန်နှုန်းဖြင့် မောင်းနှင်သွားသည်ဟု ထပ်မံတွေးအုံးအံ့။ ကမ္ဘာမြေမှနေ၍ အလင်းအလျင်အား တိုင်းတာလျင် c တန်ဖိုးကို ရမည်ဖြစ်ပြီး အာကာသယာဉ်ပေါ်မှ အလင်းအလျင်အား တိုင်းတာလျင်လည်း ယင်း c တန်ဖိုးကိုသာ မပြောင်းလဲဘဲ တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အလင်းသည် တူရုပြုရာနေရာနှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲ ပကတိအလျင်နှုန်းဖြင့်သာ မူသေရွေ့လျားသည်။ သို့သော်လည်း အလင်းဖြတ်သန်းသွားသည့် ကြားခံနယ်မှာ လေဟာနယ်ဟု သတ်မှတ်သည်။ ဆိုရသော် အလင်းသည် ဖန်၊ လေထု အစရှိသော ကြားခံနယ်များအား ဖြတ်သန်းပါက မူလ c တန်ဖိုးထက် အနည်းငယ်လျော့နည်းသည်။ ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် အလင်းအလျင်သည် ၁ စက္ကန့်လျင် ၂၉၉ ၇၉၂ ၄၅၈ မီတာဖြစ်ပြီး ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတကာ ယူနစ်အဖွဲ့အစည်းမှ အလင်းအလျင်အား လေဟာနယ်တွင်ဆိုပါက ၁ စက္ကန့်၏ ၂၉၉ ၇၉၂ ၄၅၈ ပုံ (၁/၂၉၉ ၇၉၂ ၄၅၈) ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။
↑ Penrose၊ R (2004)။ The Road to Reality: A Complete Guide to the Laws of the Universe။ Vintage Books။ pp. 410–1။ ISBN 978-0-679-77631-4။ ... the most accurate standard for the metre is conveniently defined so that there are exactly 299,792,458 of them to the distance travelled by light inastandard second, givingavalue for the metre that very accurately matches the now inadequately precise standard metre rule in Paris.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အလင်းအလျင်&oldid=524958" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ ဇူလိုင် ၂၀၂၀၊ ၁၉:၀၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။